2015-12-13 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
ပထမဦးစွာ အောက်က ဇယားကွက်ထဲက Samsung USB Driver ကို Download လုပ်ပြီး ဖိုင်ဖြေလိုက်ပါ. ပြီးလျှင် Install လုပ်လိုက်ပါ။ ပုံ(၁)
ပြီးလျှင် Odin နှင့် Rom ကို Download လုပ်လိုက်ပါ။ Single Rom ဆိုလျှင် ပုံ(၂) လိုမြင်ရမှာဖြစ်ပြီး Multiple Rom ဆိုလျှင် ပုံ(၃)လို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Version 3.1 နှင့်အောက်ဆိုရင်တော့
Settings > Developers Option > USB Debugging ကို Enable ပေးလိုက်ပါ။ ပုံ (၄)
Version 3.2 Android 4.2.2 နှင့်အထက်ဆိုရင်တော့
Settings > About Phone > Built Number ကို ၈ ကြိမ်တောက်လိုက်ပါ။ ပုံ(၅)
ဖုန်းကို ပါဝါပိတ်လိုက်ပါ။ ပုံ(၆)
Volume Down + Home + Power ခလုတ် ၃ ခုစလုံးကို ပြိုင်တူနှိပ်ပြီး ဖိထားလိုက်ပါ။ ပုံ(၇) လိုမျိုး ပုံပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့ Volume Up ကို တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ. အဲ့တာဆိုရင် Download mode ထဲကို ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
Download လုပ်ထားတဲ့ Odin3 ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
Odin ကနေ မိမိရဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Mobile device ကို စတင်ပြီး အလိုလျောက် စစ်ဆေးပါ လိမ့်မယ်။ (ပုံ၁၀)
Single Rom ဆိုရင်တော့ ပုံ(၁၁)လိုမျိုး PDA အကွက်ကနေ .md5 ဖိုင်ကို လမ်းကြောင်း ရွေးပေးလိုက်ပါ။
Multiple Rom ဆိုရင်တော့ အောက်ကအတိုင်း ဖိုင်လမ်းကြောင်း ရွေးပေးရမှာပါ။ ပုံ(၁၂)
“PIT” button ကတော့ .pit extension ဖိုင်တွေကို ရွေးပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
“BL” or “Bootloader” ကတော့ BL xxx tar.md5 ဖိုင်ကို ရွေးပေးရမှာပါ။
“AP” အကွက်မှာတော့ AP xxx tar.md5 ဖိုင်ကို ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
“CP” အကွက်ကတော့ CP_xxx_tar.md5 ဖိုင်ကို ရွေးပေးရမှာပါ။
“CSC” အကွက်ကတော့ CSC xxx tar.md5 ဖိုင်ကို ရွေးပေးရမှာပါ။
အားလုံးရွေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ Start ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
1. Samsung USB Driver Mediafire Google Drive
2. Rom Mediafire Google Drive
4. Rom တင်နည်း စာအုပ်